Somaliland : 744 Ka Mida Ciidanka Asluubta Oo Darajo Dalacsiin Ah Loo Sameeyay - Xogside-news Xogside
Home WARARKA DALKA Somaliland : 744 ka mida ciidanka asluubta oo darajo dalacsiin ah...
Somaliland : 744 ka mida ciidanka asluubta oo darajo dalacsiin ah loo sameeyay
Taliyaha guud ee ciidanka Asluubta JSL Sareeyo Guuto Axmed Cawaale Yuusuf (libaax) ayaa ka qayb galay Xafladda Darajada Loogu Xidhayay Ciidanka Asluubta 744, ka mida ciidanka asluubta oo darajo dalacsiin loo sameeyay.
Munaasibada dalacsiinta ciidankaas oo lagu qabtay taliska ciidanka asluubta Somaliland ayaa waxa dejooyinka xubnahaas la dalacsiiyay ay isugu jireen darajada dable illaa gaashaanle dhex.
Taliye ku-xigeenka Ciidanka Asluubta JSL Aadan Axmed mooge (Kannadi) ayaa faahfaahin ka bixiyay Gudidda uu Taliyaha Guud ee ciidanka Asluubtu u saaray dalacsiinta ciidankaas ayaa sheegay in arrintaas loo maray hannaan cadaaladeed.
Ugu dambayn taliyaha Guud ee Ciidanka Asluubta JSL Sareeyo Guuto Axmed Cawaale Yuusuf (Libaax) ayaa Hambalyo Udiray dhamaan Xubnahaas Dalacay isaga oo kula dardaarmay inay noqdaan kuwo Dadkooda Daacad ugu Adeega, waxaanuu saraakiishaas faray in ay qarankooda daacad ugu shaqeeyaan, iyadoo uu taliyuhu darajooyinkii ku taxay saraakiishaas ciidanka asluubta ka tirsan ee dalacay.
Previous articleSomalia: Shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka oo ka furmay Muqdisho
Next articleWaftigii madaxweyne ku xigeenku hogaaminayey oo lagu soo dhaweeyay deegaano ka tirsan Gobolka Awdal